Raad Raac News Online – Maktabadaha geela oo hormarinaya wax akhriska Kenya Arday Miyiga wax lagu Baro (Qorma Xiisa Leh)
Maktabadaha geela oo hormarinaya wax akhriska Kenya Arday Miyiga wax lagu Baro (Qorma Xiisa Leh)
Faarax November 8, 2012 0
Badhtamaha magaalada Kalkach, oo sagaal kiiloomitir u jirta magaalada Wajeer, ayaa Aadan Cabdi iyo Maxamed Cadow ay isku dayayaan in ay geela fadhiisiyaan.
Buugaagta ayaa aagga Wajeer iyo Gaarisa lagu daabuleeyaa geel markii magaalo laga qaadayo oo mid kale la gaynayo. [Bosire Boniface/Sabahi]
Meel u dhaw oo ah geed qansax ah hoostiis, ayaa koox caruur iyo dad wayaan isugu jira ay daawanayaan dadka maktbadaha ka shaqeeya oo soo dajinaya sanduuqyo alwaax ah oo ay buugaag ka buuxaan. Kaddib markii wixii ku jiray lagu daadiyo gogol, ayay caruurta iyo dadka waawayn buugta ku shamuumaan si ay u doortaan mid ay ku akhriyaan hadhka geedka.
Maxamed Aadan Maxamuud oo laba iyo toban jir ah kana mid ah dadka degan Kalkach ayaa sheegay in akhrinta buugtu ay ku kaalmaysay in uu kor u qaado xirfadiisa xidhiidh. “Geela ayaa bishiiba laba jeer buugta keena tuuladeena, buugtuna waxay kobciyeen aqoontayda arrimaha sida dhaqamada kale,” ayuu yiri.
Kumanaan ah dadka degan Gobalka Waqooyi Bari ayaa ka faaiidaystay Maktabadda Geela ee Guur-Guurta, oo ah khidmad ay bilawday Maktabadda Qaranka ee Kenya sanadkii 1996 si loo kobciyo xirfada akhris ee gobalka, sidaas waxaa sheegay Rashiid Maxamed Faarax oo ah maktabadle ka shaqeeya Gobalka Waqooyi Bari.
Illaa Oktoobartii hore, waxaa jiray in ka badan 6,000 oo diiwaan gashan iyo in ka badan 5,000 oo aan diiwaan gashanayn oo ah isticmaalayaal maktabad oo gobalka jooga, ayuu u sheegay Sabahi.
Maktabadda ayaa inta badan bixisa buugaag ardayda ka kaalmaynaya barshada Ingiriiska iyada oo la jaan-qaadaysa manhajka iskuullada qaranka, ayuu yiri. Maktabadda guur-guurta ayaa shaqaysa Isniinta ilaa Khamiista inta u dhaxysa 8-da subaxnimo illaa 6-da galabnimo.
“Xubnaha ayaa daynsan kara illaa labo buug mudo 14 maalmood ah illaa iyo marka maktabadda guur-guurta ay isla xarunta ku soo noqonayso,” Faarax ayaa sidaas sheegay. “Intaas ka dib, way cusboonaysiin karaan buugtooda ama way soo celinayaan si ay kuwo cusub u qaataan.”
In kasta oo khidmaddan ay aad kor u qaaday shacabka heli kara buugaagta, hadana Faarax wuxuu qabaa in ay jirto fursad kor loogu sii qaado helitaanka, hoosna loogu dhigo xadka akhris iyo qoritaan la’aanta ah ee gobalka ka jirta.
Hadda, khidmooyinkan waxaa kaliyoo laga heli karaa Gaarisa iyo Wajeer meelo 11 kiiloomitir u jira, ayuu yiri, isaga oo intaas ku daray in maktabaddu ay haysato sagaal geel ah, qabatana sadex socdaal oo u khidmeeya laba xarun maalin walba. “Gaarisa waxaan u dirnaa labo unug oo guur-guura oo aan u dirno laba xarun oo kala gadisan maalin walba sababta oo ah way wayn tahay. Wajeer waxaan u dirnaa hal unug oo guur-guurta,” ayuu yiri.
“Waxaan jecelnahay inaan khidmadahan u fidino meelo ka baxsan aaggeena oo aan u fidino magaalooyin kale sida Ijaara iyo Mandheera, laakiin ma awoodi karno sababta oo ah kharashkaa nagu yar,” ayuu yiri. “Waxaan haynaa waraaqo badan iyo dalabaad ka imaanaya hay’adaha waxbarashada oo anaga naga doonaya in aan khidmadda u gayno laakiinse awoodeenu way xadidan tahay.”
Sida uu qabo Aadan Sheekh Cabdullahi oo ah Gudoomiyaha Waxbarshada ee Gobalka Waqooyi Bari, heerka qoridda iyo akhriska ee gobalka wuxuu kor ugu kacay tobankii sano ee la soo dhaafay illaa 15% halka uu markii hore ka ahaa 9%. Intaas waxaa dheer, iskuullada la geeyo maktabadaha guur-guura ayaa ka mid ah kuwa gobalka ugu wanaagsan imtaxaanada waddanka, ayuu u sheegay Sabahi.
Waxaa intaas ka sii muhiimsan, wuxuu sheegay in maktabaduhu ay kaalmaynayaan dhiiri galinta dhaqanka akhriska ee ku aadan kuwa aan awooda u lahayn ee majtamaca ka tirsan oo aan u dhawayn meelaha ay maktabaduhu ku yaalaan, iyada oo ay arintaas ay sababi lahayd in la iska iloobo.
Ka gudubka geela si loo hormariyo waxbarshada
Dad waawayn iyo caruur jooga Kalkach oo ku uruursan buugaag ay u keentay Maktabadda Geela ee Guur-Guurta. [Bosire Boniface/Sabahi]
Iyada oo inta badan shacabka gobalka dagan ay ku nool yihiin nolol reer guuraanimo, maktabadaha rigliga ah waxba ma taraan, Cabdulahi ayaa sidaas sheegay, isaga oo intaas ku daray in dhaqaale dheeraad ah oo lagu badinayo shaqaalaha maktabadaha guur guura ay u joogtaynayso qoysaska reer guuraaga ah in loo raaco meel kasta oo ay tagaan.
Maryan Cusmaan oo ah maktabadley ka shaqaysa Degmada Wajeer ayaa u sheegtay Sabahi in maalgalinta dheeraadka ah ay sahlayso in dadku helaan maktabadaha baabuurtu waddo oo ah kuwo aan ugu tiirsanayn geela gaadiid ahaan.
“Hadii aynaan u gudbaynin maktabadaha baabuurta ee guur-guura, waxaan doonaynaa in aan badino tirada geela ee buugaagta gooshinaya.” ayay tiri.
Abaabulayaasha maktabadda ayaa doonaya in ay helaan dhul uu geelu daaqo, gaar ahaan xilliga abaarta oo ah marka oo ay ku khasban yihiin in ay ku soo koobaan khidmadda laba jeer usbuucii. “Maadaama uusan jirin dhul daaqsin ah oo uu geelu daaqi karo, ma yeeli karno inaan geela maalintii oo dhan ku hayno qorax kulul iyada oo aan waxba la siinaynin, inta aan sugayno caruurta ku mashquulsan akhrinta,” ayay tiri.
Maxamed Bunow Korane oo ah guddoomiyaha Jihan Foundation, oo ah hay’ad kafaalo qaadda waxbarashada gabdhaha ee Gobalka Waqooyi Bari, wuxuu yiri in kasta oo dadaalkan uu guulo ilaa xad ah soo hooyay, waxay dawladdu u baahan tahay in ay la timaado qorshe xili dheer soconaya oo ku aadan reer guuraaga si loo sii hormariyo heerka waxbarashada.
“Qoysas badan ayaan awoodi karin buugaag, waxa yar ee ay haystaana waxay ku bixiyaan cunto,” Korane ayaa tiri. “Xaaladahaas oo kale, dadku ma qiimaynayaan buugaagta. Waxbarashadu waa hab taxane ah, wakhtiga u dhaxeeya booqashada maktabadda geela waa mid aad muhiim u ah.”
Waxaa qoray Bosire Boniface oo Wajeer jooga Source: Sabahionline